IP တယ်လီဖုန်းဆိုတာဘာလဲ၊ သင့်လုပ်ငန်းကို ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ။ e-commerce သတင်း
Encarni Arcoya | 07/05/2022 12:43 | အီးကောမတ်စ
လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်၊ ကုမ္ပဏီ၊ အွန်လိုင်းစတိုး၊ ဖောက်သည်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန် အရေးကြီးသည်။ eCommerce ဖြစ်ခြင်း၊ ဖောက်သည်များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိခြင်း သို့မဟုတ် အနည်းဆုံးခွင့်ပြုခြင်းသည်ပင် ၎င်းတို့၏ဝယ်ယူမှုများတွင် ပိုမိုလုံခြုံစေပါသည်။ ဒါပေမယ့် နှုန်းထားနဲ့ ရွေးချယ်စရာတွေကို ရှာတဲ့အခါ၊ la IP တယ်လီဖုန်း ပိုအရေးကြီးလာပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။
ဒါပေမယ့် IP တယ်လီဖုန်းဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘာအတွက်လဲ ကုမ္ပဏီတွေကို ဘာကြောင့် အကြံပြုတာလဲ။ အဲဒါကို အောက်မှာ ပြောပြပါမယ်။
1 IP တယ်လီဖုန်းဆိုတာ ဘာလဲ။
1.1 IP တယ်လီဖုန်းနှင့် အင်တာနက်ပေါ်တွင် အခြားခေါ်ဆိုမှုပုံစံများကြား ကွာခြားချက်
2 IP တယ်လီဖုန်း အလုပ်လုပ်ပုံ
3 IP တယ်လီဖုန်း၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ
4 IP တယ်လီဖုန်းက ကုမ္ပဏီအတွက် ထိုက်တန်ပါသလား။
IP တယ်လီဖုန်းဆိုတာ ဘာလဲ။
လက်ရှိတွင်၊ IP တယ်လီဖုန်းသည် ကုမ္ပဏီများအတွက် ဦးစားပေးဆက်သွယ်ရေးပုံစံတစ်ခုဖြစ်လာပြီး ယင်းရွေးချယ်မှုဖြင့် သမားရိုးကျတယ်လီဖုန်းလိုင်းများကို အစားထိုးနိုင်သည်။
အထူး ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အင်တာနက်မှတဆင့် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်စေသော နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဥပမာများသည် ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆိုမှုများ သို့မဟုတ် WhatsApp၊ Zoom၊ Skype မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့သည်...
IP တယ်လီဖုန်းဟု သိကြသည့် အခြားအမည်မှာ Internet Telephony Protocol ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အသံကို အင်တာနက်မှတဆင့် အခြားသူတစ်ဦးထံ ပေးပို့သည့် ဒေတာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် VoIP နည်းပညာကို အသုံးပြုသည်။ မယူခင်မှာ ကြားတဲ့အသံက တစ်ဖန်ပြန်ဖြစ်လာတယ်။ ဤအရာအားလုံးကို မိုက်ခရိုစက္ကန့်အတွင်း
IP တယ်လီဖုန်းနှင့် အင်တာနက်ပေါ်တွင် အခြားခေါ်ဆိုမှုပုံစံများကြား ကွာခြားချက်
ငါတို့အရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ IP တယ်လီဖုန်းက Skype ခေါ်ဆိုမှုတွေ၊ WhatsApp လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်... ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ အဲဒါက အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။
တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လုံးဝကွဲပြားပါသည်။ ပြီးတော့ အဲဒါပါပဲ။ လူနှစ်ဦးကြား ပုံမှန်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွင် နှစ်ဦးစလုံးသည် တူညီသောအက်ပ်ရှိရန် လိုအပ်သည်။မဟုတ်ရင် လုပ်လို့ မရဘူး။ IP တယ်လီဖုန်းမှာ မလိုအပ်ပါဘူး။ အမှန်မှာ၊ ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်သည့်အရာမှာ သီးသန့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိရန်မလိုဘဲ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသည့် တယ်လီဖုန်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်// သို့မဟုတ် လက်ခံနိုင်စေရန် cloud တွင် သိမ်းဆည်းထားသောနံပါတ်တစ်ခု (သို့မဟုတ် ၎င်းတို့တွင် ပို့ရန်) ဖြစ်သည်။
IP တယ်လီဖုန်း အလုပ်လုပ်ပုံ
ဒီနည်းပညာရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံအကြောင်းကို နည်းနည်းပိုသိချင်ရင် အဲဒါကို သိထားသင့်ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် IP ပရိုတိုကောကို အသုံးပြုသည်။ အသံအချက်ပြမှုသည် LAN ဟုခေါ်သော ဒေသန္တရကွန်ရက်တစ်ခုမှ ထွက်ခွာသွားသည့် ဒေတာပက်ကေ့ခ်ျများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်၊ သို့မဟုတ် အင်တာနက်မှ တိုက်ရိုက် (IP မှ အသံဖြင့်ဖြစ်စေ)။ ၎င်းသည် တစ်ဖက်လူထံသို့ရောက်ရှိပြီး ထိုလူကြားသည့်အသံအဖြစ်သို့ ပြန်ပြောင်းသည်။ သို့သော်လည်း စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက် စောင့်ရတာကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ ယူဆနိုင်တာကြောင့် ဒါဟာ အရမ်းမြန်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, သင်သတိရရပေမည် IP တယ်လီဖုန်းသည် အလကားမဟုတ်ပါ။. "သာမန်" ကဲ့သို့ပင်၊ ဤနေရာတွင်လည်း အော်ပရေတာများကြားတွင် ချိတ်ဆက်မှုကုန်ကျစရိတ်များ အလွန်နည်းသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ရှိနေပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ စပိန်တွင် စျေးနှုန်းအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း အခြားနေရာများသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါက ဖုန်းခေါ်ဆိုခမှာ ပိုမိုစျေးကြီးနိုင်သည်မှာ မှန်ပါသည်။
IP တယ်လီဖုန်း၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အတိုင်း ပြောကြားခဲ့သည့် IP တယ်လီဖုန်းသည် ကုမ္ပဏီများအတွက် အကောင်းဆုံးဟု ထင်ရသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေပြီး ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကိုလည်း တိုးတက်စေသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့။ ဒါပေမယ့် "ကောင်း" တဲ့ အရာအားလုံးမှာလည်း မကောင်းတဲ့ အပိုင်းတွေ ရှိတယ်။
ထို့ကြောင့် ရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များကို သိရှိထားသင့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အရာများအပြင် IP တယ်လီဖုန်း၏အခြားအားသာချက်များမှာ-
သူတို့လုပ်နိုင်တဲ့ အလားအလာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများစွာကို တစ်ချိန်တည်းတွင်ဖြေကြားပါ။ အမှန်မှာ၊ ၎င်းသည် အသုံးပြုသူများအား တက်ရောက်ရန် ဖုန်းပေါ်တွင် စောင့်ဆိုင်းရန် တားဆီးထားသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့် နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများ၊ အချိန်ဇယားများ၊ ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများ၊ စာရင်းဇယားများကဲ့သို့သော အပိုဝန်ဆောင်မှုများ
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် အတုအယောင်နံပါတ်ကို အသုံးပြုခြင်း ရှိ၊ မရှိကို မည်သူမှ သိနိုင်မည် မဟုတ်သောကြောင့် နိုင်ငံတကာ ပုံရိပ်တစ်ခု ပေးပါရစေ၊ ချိတ်ဆက်မှုများသည် ယခုအခါ အလွန်အားကောင်းနေသောကြောင့် ၎င်းတို့တွင် ပြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသံမကောင်းခြင်း စသည်ဖြင့် ရှိနေပါသည်။
သင်လုပ်နိုင်သည် မိုဘိုင်းဖုန်းကနေ ကြိုးဖုန်းသုံး၊ အပြောင်းအရွေ့တွင် ခေါ်ဆိုမှုများကို ဖြေကြားပြီး ခေါ်ဆိုမှုများကိုပင် လွှဲပြောင်းပါ။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ အားသာချက်တွေအပြင် ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် အားနည်းချက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ အတိအကျ-
ခေါ်ဆိုမှုများ၏ အရည်အသွေးသည် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြောင်းလဲနေသော်လည်း၊ သို့တိုင်၊ အနှောင့်အယှက်များ၊ နှောင့်နှေးမှုများ၊ သတ္တုသံများပါရှိနိုင်သည်ကို သတိပြုသင့်သည်။
သင့်တွင် အထူးစက်မရှိလျှင် ၎င်းကိုသုံး၍မရပါ။ စျေးကြီးပေမယ့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံတာက သင့်အတွက် အထောက်အကူများစွာ ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်အားပြတ်တောက်သည့်ကိစ္စတွင်၊ သင်၏ IP တယ်လီဖုန်း အလုပ်မလုပ်ပါ။. အင်တာနက် မသုံးရင် ဒီလိုပါပဲ။ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုအတွက်၊ ကြာရှည်ခံသည့်ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သော်လည်း အင်တာနက်အခြေအနေတွင်၊ မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်တွင် တယ်လီဖုန်းချိတ်ဆက်မှုကဲ့သို့သော အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို လမ်းကြောင်းပြောင်းရန် သို့မဟုတ်၊ အလင်းမရှိသောအခါတွင် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို ထပ်ဆင့်ပို့နိုင်စေမည့် WebRTC ဟုခေါ်သော Google မှ ဖန်တီးထားသော ပရောဂျက်ကိုပင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
IP တယ်လီဖုန်းက ကုမ္ပဏီအတွက် ထိုက်တန်ပါသလား။
သင့်ကုမ္ပဏီသည် သေးငယ်ပါက သို့မဟုတ် သင်အလွယ်တကူစီမံခန့်ခွဲနိုင်သော အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုရှိလျှင် သင်ဖုန်းခေါ်ဆိုရန်ခက်ခဲသောကြောင့် ဤအကြံအစည်သည် သင့်အား အလွန်အကျွံအယူခံဝင်မည်မဟုတ်ပါ၊ သင်လက်ခံရရှိသည့်အရာများသည် သင့်အတွက်ဖြေဆိုရန်လွယ်ကူပါသည်။
သို့သော်၊ ၎င်းသည်စတင်ကြီးထွားလာပြီးဖောက်သည်များနှင့်ပိုမိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဆက်သွယ်မှုရှိလာသောအခါ၊ အရာများသည်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဒီကိစ္စမှာ, IP တယ်လီဖုန်းသည် သင့်အား သုံးစွဲသူများအား ပိုမိုထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် နည်းလမ်းများကို ပေးပါသည်။ စောင့်ဆိုင်းခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရုံသာမကဘဲ မိုဘိုင်းလ်ကို အချိန်တိုင်းသတိထားနေစရာမလိုဘဲ အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် ကွန်ပြူတာ သို့မဟုတ် အခြားစနစ်မှ ၎င်းတို့ထံ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင်၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူအများအပြား၏ကြောက်ရွံ့မှုတစ်ခုမှာလူများသည်ဆက်သွယ်ရေးပြဿနာများရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောချိတ်ဆက်မှုဖြင့်ဖြေရှင်းရန်လွယ်ကူသည်။ Y သူတို့ခေါ်ဆိုနေသောဖုန်းသည် သာမန်ဖုန်းမဟုတ်သော်လည်း cloud ထဲတွင် တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း မည်သူမျှမသိစေရပါ။. လကုန်တွင် ကုန်ကျစရိတ်ကြီးကြီးမားမားမပေးဘဲ ဖုန်းနံပါတ်များစွာကိုပင် သင်ရနိုင်သည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်သည် သင့်လက်ထဲတွင် ရှိနေသည်၊ သို့သော် ၎င်းသည် သင့်လုပ်ငန်းကို သင်ရှာဖွေနေသည့် ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်နိုင်ပြီး ၎င်းကို ထားရန် ဆုံးဖြတ်သူ ပိုများလာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ECommerce သတင်း » အီးကောမတ်စ » IP တယ်လီဖုန်းဆိုတာ ဘာလဲ၊ သင့်လုပ်ငန်းကို ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ။